गोजमुमो-2 लाई सुब्बाको आक्रमण : विनय तामाङहरूले लाखौं रुपियाँ कुन फण्डबाट बाँड्दैछन्?-शारदा राई सुब्बा - खबरम्यागजिन
Homeमुख्य समाचारगोजमुमो-2 लाई सुब्बाको आक्रमण : विनय तामाङहरूले लाखौं रुपियाँ कुन फण्डबाट बाँड्दैछन्?-शारदा राई सुब्बा
May 15, 2019 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि मुख्य समाचार 0
‘विनय तामाङहरूले गाउँ गाउँ गएर समाज सङ्गठनलाई पैसा बाँड्दैछन्। युवा भाइहरूलाई पैसा दिँदै हाम्रो दार्जीलिङको युवा समाजलाई बिगार्ने काम हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘दार्जीलिङमा हजारौं समाजहरू छन्। ती समाज सङ्गठनहरूलाई पचास हजार, लाख रुपियाँ गरेर बाँडिदैन। त्यत्रो रूपियाँ कहाँबाट कुन फण्डबाट बाँडिदैछ? पैसा थाप्ने समाजहरूले थापेको पैसा आफ्नो समाजको व्याङ्क एकाउन्टमा डिपोजिट गर्दैछ कि गरेको छैन?’
आफ्नो चुनाव प्रचार गर्दै तृणमूल कङ्ग्रेसकी बागी नेत्री एवं दार्जीलिङ विधानसभा उप चुनावको स्वतन्त्र उम्मेद्वार शारदा राई सुब्बा फुबछिरिङ चियाबारी पुगिन्। मन्दिरमा शिर झुकाएर प्रार्थना गरिन्। जनतासित भेटघाट गरिन्। सबैलाई सचेत भोट दिने अपिल पनि गरिन्।
मिडियासित कुरा गर्दै उनले सत्तासिन पार्टीले पैसाको राजनीति गरिरहेको आरोप लगाएकी छन्। ‘विनय तामाङहरूले गाउँ गाउँ गएर समाज सङ्गठनलाई पैसा बाँड्दैछन्। युवा भाइहरूलाई पैसा दिँदै हाम्रो दार्जीलिङको युवा समाजलाई बिगार्ने काम हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘दार्जीलिङमा हजारौं समाजहरू छन्। ती समाज सङ्गठनहरूलाई पचास हजार, लाख रुपियाँ गरेर बाँडिदैन। त्यत्रो रूपियाँ कहाँबाट कुन फण्डबाट बाँडिदैछ? पैसा थाप्ने समाजहरूले थापेको पैसा आफ्नो समाजको व्याङ्क एकाउन्टमा डिपोजिट गर्दैछ कि गरेको छैन?’
विभिन्न जात गोष्ठीका धार्मिक स्थलहरूमा पुग्दै त्यसको मरम्मत गर्ने रकम दिन्छु भन्दै विनय समूहले मानिसहरूले धर्मको नाममा भोट बटुल्ने काम गरिरहेको पनि उनले आरोप लगाइन्।
‘यो हाम्रो गोर्खा जातिमा अनेकता ल्याउने कामको शुरूवात हो। यसबारे सबै जात गोष्ठीका मतदाताहरूलाई सचेत बन्ने अनुरोध गर्छु,’ उनले भनिन्।
उनी बेनक्बर्न चियाबारीका विभिन्न गाउँहरूमा पुगिन र घर दैलो गएर आफुलाई भोट हाल्ने अपील गरिन्। गाउँबासीको न्यानो माया र स्वागत पाउँदा भावविभोर बनेको बताउँदै उनले सबैलाई सचेत भोट गर्ने अपील गरिन।
‘गोर्खाल्याण्ड ल्याउँछु भनेर तपाईँहरूको बहुमतले जितेर विधानसभा गएर तपाईँहरूको गाउँमा फर्किएर आएनन्। न त कुनै विकासको काम नै गरे,’ उनले भनिन्, ‘पाँच वर्षकोलागि जितेर गएको विधायक तीन बर्ष पछि नै तृणमूल कङ्ग्रेसमा गएर एमपी चुनावमा उठे यसरी तपाईँहरूलाई ढाँट्ने पार्टीलाई भोट दिनु हुँदैन।’
उनले चियाबारीका श्रमिकहरूलाई पनि चुनावको मुखमा विनय तामाङले ढाँट्ने काम गरिरहेको जनाइन्। ‘२०१२ देखि उनीहरू सत्तामा थिए। त्यति बेला चियाबारीको श्रमिकको दु:ख र पर्जापट्टाको कुराको सम्झना उनीहरूलाई आएन। १०५ पाँच दिन पछिदेखि यता पनि सत्तामा बसेको डेड बर्षसम्म चियाबारीको श्रमिकको क्षतिपूर्तिबारे किन सोचेनन्। न त पर्जा पट्टा नै दिए। यदि क्षतिपूर्ति दिएमा हामी आइला र भूईँचालोको क्षतिपूर्ति जस्तो हुन दिने छैनौं। क्षतिपूर्ति पक्का श्रमिकसम्म पुगेको हुनु पर्छ।’
बेनक्बर्न चियाबारी क्षेत्रमा आफ्ना पोस्टरहरू च्यातिदिएको पनि उनले जनाइन्। ‘यो कायरतापूर्ण काम हो। गोजमुमो २ का कार्यकर्ताहरूले यो घिनलाग्दो काम गरिरहेको हामीलाई थाह लागेको छ,’ उनले भनिन्, ‘हामी पहाडमा साँचो शान्ति होस् भन्ने चाहन्छौं। यदि यसरी अशान्ति सृष्टि गर्न खोजेमा प्रशासनिक कार्यवाहीको माग गर्नेछौं।’